नेपाल आज | यसरी हुन्छ ‘हिप फ्याक्चर’को उपचार
यसरी हुन्छ ‘हिप फ्याक्चर’को उपचार
डा. रञ्जितकुमार साह, अर्थोपेडिक सर्जन ।
–हिप फ्याक्चरको उपचार एकदमै जटिल हुने गर्छ । त्यसैले, दुर्घटनामा पर्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला टाउको, छाती र पेटमा चोटपटक लागे–नलागेको यकिन गर्नुपर्छ । यदि, शरीरका अन्य भागमा चोटपटक लागेमा उपचारमा सजगता अपनाउन जरुरी हुन्छ ।
–कतिपय अवस्थामा वयस्क तथा बुढाबुढीमा भने हड्डी आफैँ नजोडिने अवस्था हुन्छ । यस्तोमा जोर्नी प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो जानकारी नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
हिप फ्याक्चर डा. रञ्जितकुमार साह